UDkt Senzo ufuna ukwelapha umhlaba – ngokomzimba nangokomphefumulo | Scrolla Izindaba
UDkt Senzo ufuna ukwelapha umhlaba – ngokomzimba nangokomphefumulo
USenzeni Tshuma, owaziwa ngegama lakhe lase siteji uDr Senzo ungumbhali wezingoma, ungumshayi wesiginci, ungumculi – kanti futhi ungudokotela oqeqeshiwe.
UDkt Senzo uthe, esemncane wayefuna ukuba ngumculi, kodwa waphoqeleka ukuthi afundele ubudokotela ukuze ajabulise uyise.
“Kwakungelula ukuyeka umculo. Ubaba wangithengela isiginci ngosuku lwami lokuzalwa lwesishiyagalolunye,” kusho uTshuma.
“Kusukela ngalolo suku, umculo waba seduze nomphefumulo wami. Ngesikhathi ezinye izingane zisemgwaqeni zidlala, mina ngangisendlini ngidlala isiginci ngiziculela.”
Ubaba wakhe wayazi ukuthi uTshuma uwuthanda kangakanani umculo kodwa wayengamvumeli ukuthi awenze umculo ngaphandle kokuthola iziqu zobudokotela.
“Ngesikhathi ngibhalisela ubudokotela, ngangikwenzela nje ukuthi ubaba asuke emhlane wami, kodwa ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ngawuthanda lo msebenzi,” kusho uTshuma.
“Ukusiza abantu kusondelene kakhulu nenhliziyo yami. Ngiyajabula ukuthi ubaba wangiphoqa ukuba ngifundele ubudokotela. Kuyangisiza ukufeza inhloso yami okungukuphilisa,” kusho uTshuma.
Ngesikhathi esafunda, uTshuma wayesebenzisa isikhathi sakhe sokuphumula ukubhala umculo nokudlala isiginci.
Ngonyaka wakhe wokugcina wokufunda ngowezi-2018, uTshuma wakhipha izingoma ezine ezibizwa nge-Dear Mary, Nobody but You, Hard to Move on nethi Prodigal Son.
“Ngikholwa ukuthi, umuthi uyaphilisa kodwa umculo uphilisa umphefumulo. Ngiyakujabulela ukwelapha umhlaba ngezindlela ezimbili ezehlukene, okungumculo kanye nomsebenzi wami.”
UTshuma usanda kukhipha ingoma ethi, Impilo.
Uke wavela ezingomeni ezimbili zikaDJ Sox esihloko sithi-Woza December nethi Dreaming.
“Ngimaketha lezi zingoma ngesikhathi esincane engisithola ohlelweni lwami lomsebenzi. Ngibhala nezinye izingoma engingathanda ukuziqophela i-albhamu yami uma isikhathi sesifanele.”
UTshuma njengamanje uqeqeshelwa ubudokotela esibhedlela i-Edendale eMgungundlovu, KwaZulu-Natali.